Farriintii Kitaabka Oo La Soo Koobay | Farriinta Kitaabka
Yehowah Aadan iyo Xaawa buu abuuray siday weligood Janno ugu noolaadaan. Shayddaankii been buu ku nabay magaca Ilaahay oo wuxuu ka dooday xukunka xaqa uu u leeyahay. Aadan iyo Xaawana Shayddaankii bay la caasiyoobeen oo dembi iyo dhimasho bay naftooda iyo carruurtoodaba u soo jiideen
Yehowah caasiyadan wuu xukumay oo wuxuu ballanqaaday inuu Badbaadiye iman doono. Farcankan Shayddaanka buu burburin doonaa oo wuxuu masaxi doona dhibaatooyinka ka imaadday caasinnimada iyo dembiga
Yehowah nebi Ibraahim iyo nebi Daaʼuud buu ka ballanqaaday inay ahaan doonaan awowayaasha Farcanka oo ah Masiixa. Midkan weligiisba Boqor buu ahaan doonaa
Nebiyadii Yehowah waxay sii sheegeen in Masiixa bogsiin doono dembi iyo dhimasho. Boqorka Boqortooyada Ilaahay buu noqon doonaa dad kalena way la maammuli doonaan. Boqortooyadan waxay joojin doontaa dagaallada, jirrada iyo dhimashadaba
Yehowah Ciise dhulka buu u soo diray oo wuxuu ku sheegay inuu Masiixii ahaa. Ciise Boqortooyada Ilaahay buu ka wacdiyay oo noloshiisii allabari buu u bixiyay. Dabadeed Yehowah samada buu ku soo sarakiciyay Ciise oo ruux ah
Yehowah Ciise buu samada Boqor kaga dhigay. Tani waxay calaamadeysay bilowga maalmaha ugu dambeeya ee nidaamka dunidan. Ciise raacayaashiisa dunida jooga buu tilmaamaa markay caalamkoo dhan Boqortooyada Ilaahay ku wacdinayaan
Yehowah Ciise wuxuu u sheegi doonaa inuu maammulka Boqortooyada dunida keeno. Boqortooyada waxay jejebin doontaa dowladaha sharka leh oo dhan. Dunida Janno bay ka aasaasi doontaa oo binuʼaadanka aamminka ah kaamil bay ka dhigi doontaa. Xaqa uu Yehowah xukunka u leeyahay way caddaan doontaa oo magaciisa quduus buu abidkii ahaan doonaa
Wadaag Wadaag Farriintii Kitaabka Oo La Soo Koobay